Ch 8 Mark – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Marka / Ch 8 Mark
8:1 Ary tamin'izany andro izany, indray, rehefa nisy vahoaka be, ka tsy manan-kanina, niantso avokoa ny mpianany, dia hoy izy taminy:
8:2 "Mahonena Ahy noho ny habetsahan'ny, satria, indro, efa naharitra niaraka tamiko nandritra ny telo andro izao, ary tsy manana na inona na inona mba hihinana.
8:5 Ary izy nanontany azy, "Firy ny mofo any aminareo?"Ary hoy izy ireo:, "Fito."
8:6 And he instructed the crowd to sit down to eat on the ground. And taking the seven loaves, misaotra, he broke and gave it to his disciples in order to place before them. And they placed these before the crowd.
8:7 And they had a few small fish. Dia nitso-drano azy ireo, and he ordered them to be placed before them.
8:8 Ary nihinana izy ireo ka voky. And they took up what had been leftover from the fragments: seven baskets.
8:11 Ary ny Fariseo dia lasa nivoaka ka nanomboka nifanditra taminy, mitady avy aminy famantarana avy any an-danitra ho, naka fanahy Azy.
8:12 Sy ny fisentoana mafy am-panahy, hoy izy:: "Nahoana ity taranaka ity no mitady famantarana? Amen, Lazaiko aminareo, raha misy famantarana homena an'ity taranaka ity!"
8:13 Ka naniraka azy, dia niakatra an-tsambokely indray, ka dia niverina tsy nankany ampitan'ny ranomasina.
8:14 Ary nanadino hitondra mofo. Ary izy ireo dia tsy misy aminy teo an-tsambokely, afa-tsy mofo iray monja.
8:15 Ary nandidy azy ireo, nanao hoe:: "Diniho ary tandremo, fandrao azon'ny masirasiran'ny Fariseo sy ny masirasiran'i Heroda."
8:16 Dia niresaka izany tamin'ny hafa, nanao hoe:, "Fa izahay dia tsy manan-kanina."
8:17 Ary Jesosy, fantany izany, hoy izy taminy: "Nahoana ianao no mihevitra fa izany dia satria tsy manana mofo? Ve tsy mbola fantatrao na mahatakatra? Ve mbola manana fahajambana ao am-ponao?
8:18 Mana-maso, no tsy mahita? Ary manan-tsofina, moa ve ianao tsy hihaino? Sa tsy mahatsiaro,
8:19 rehefa nanapaka ny fitiavana dimy ho an'ny dimy arivo, firy harona moa no sombintsombiny moa no nangoninareo?"Dia hoy ireo taminy, "Roa ambin'ny folo."
8:20 "Ary raha ny mofo fito mofo dia teo amin'ny efatra arivo, firy harona moa no sombintsombiny no mitondra?"Ary hoy izy ireo taminy, "Fito."
8:21 Ary hoy Izy taminy:, "Nahoana no lazaina fa tsy mbola mahafantatra?"
8:22 Dia nankany Betsaida. Ary nisy nitondra lehilahy jamba iray ho azy. Ary nangataka azy, ka mba hanendry Azy.
8:23 Ary naka ny jamba ny tanana, dia nitondra azy tany an-dafin'i ny tanàna. Ka nametra nororany ny masony, nametra-tanana taminy, dia nanontaniany hoe izy: Mahita zavatra afaka.
8:24 Ary niandrandra, hoy izy:, "Mahita ny olona aho, fa izy ireo dia toy ny mandeha hazo."
8:25 Avy eo dia nametraka ny tànany indray ny masony, ary nanomboka nahita. Dia naverina tamin'ny laoniny, ka dia afaka mahita ny zava-drehetra mazava tsara.
8:26 Ary Jesosy nampody azy ho any an-tranony, nanao hoe:, "Mankanesa ao an-tranony, Ary raha miditra ao an-tanàna, hilazalaza amin'olona. "
8:27 Ary Jesosy niala sy ny mpianany ho ao an-tanàna momba an'i Kaisaria-filipo. Ary teny an-dalana, dia nanontany ny mpianany, ka nanao taminy, "Iza no olona milaza fa Izaho no?"
8:28 Ary ireo namaly azy amin'ny hoe:: "Jaona Mpanao-batisa, ny sasany Elia, ny sasany angamba ny anankiray amin'ny mpaminany. "
8:29 Dia hoy izy taminy, "Na izany aza tena, iza no milaza fa Izaho no?"Namaly i Petera ka nilaza taminy, "Ianao no Kristy."
8:30 Ary dia nananatra azy, tsy mba milaza na iza na iza momba azy.
8:31 Dia nampianatra azy Izy fa ny Zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy, ka holavin'ny anti-panahy, ary ny mpisorona avo, ary ny mpanora-dalàna, ka hovonoina ho faty, ary rehefa afaka hateloana, dia hitsangana indray.
8:32 Ary niteny ny teny ampahibemaso. Ary Petera, nitondra an-dralehilahy nitanila, nanomboka hanitsiana azy.
8:33 Ary ny miala sy nijery ny mpianany, nampirisika an'i Petera, nanao hoe:, "Mankanesa ato ivohoko, Satana, fa tsy kokoa ny zavatra izay avy amin'Andriamanitra, fa ny zavatra izay an'ny olona. "
8:34 Ary niantso ny vahoaka miaraka sy ny mpianany, dia hoy izy taminy, "Raha misy olona mifidy ny hanaraka ahy, aoka izy handà ny tenany, dia hitondra ny hazo fijaliany, ka hanaraka Ahy.
8:35 Fa na iza na iza no efa nifidy ny hamonjy ny ainy,, dia hahavery izany;. Fa na iza na iza no namoy ny ainy, noho ny amiko sy noho ny Filazantsara, dia hamonjy izany.
8:36 Fa inona no soa ny olona, raha mahazo izao tontolo izao, nefa mahatonga loza ho an'ny fanahiny?
8:37 Na, inona no homen'ny olona ho takalon 'ny ainy?
8:38 Fa na iza na iza no ho menatra Ahy sy ny teniko, eo anivon 'ity taranaka sady mijangajanga no manota, ny Zanak'olona kosa dia ho menatra azy, raha ho tonga amin'ny voninahitry ny Rainy, mbamin'ny anjely masina. "
8:39 Ary hoy Izy taminy:, "Amen Lazaiko aminareo, fa misy ny sasany eo amin'izay mijoro eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny fanjakan'Andriamanitra tonga amin'ny hery. "